Onu ulo oru onu ahia di elu nke ngwa ahia nke ndi na enye ogwu na ndi ulo oru | YiZheng
Kedu ihe eji arụ ọrụ ọkụ dị elu arụ ọrụ eji arụ ọrụ?
•Energy na ike: Thermal ike osisi, ahihia incineration ike osisi, Biomass mmanụ ọkụ ike, Industrial n'efu okpomọkụ mgbake ngwaọrụ.
•Smgbaze ọla: ikuku na-efe ikuku nke na-eme ka ihe na-eme ka ihe na-eme (Sintering igwe), Mmepụta coke na-ere ọkụ (Ọkụ coke oven).
•Gas na ihe nnyefe: General ikuku nnyefe, High-okpomọkụ ikuku nnyefe, Combustible gas nnyefe, Corrosive gas nnyefe, Gas weere na adịghị ọcha nnyefe.
•Elibunye nke ntụ ntụ, Ngwongwo ihe / Ihe ntụ ntụ / ihe mpempe akwụkwọ / ihe ndị nwere eriri.
•Ndị ọzọ: Pressurization na decompression akara nke ulo oru akụrụngwa, Iweghachite nke ulo oru mkpofu gas, Inye ikuku na ihicha nri na ọgwụ mmepụta akara.
Njirimara nke ulo oru mmeputa oku di elu
•Wepụta nrụpụta gas dị elu, na inye nnukwu ikuku ikuku, obere mkpọtụ.
•UM UBARA n'akuku na-aga site na ichikota imewe, akwa na-eguzogide ọgwụ, ogologo ndu ndu.
•Nwere ike gbanwee olu ya na nrụgide na-agba ọsọ site na ikuku ikuku. Nwekwara ike ịgbanwe nrụgide na olu ya site n'ịgbanwe ọsọ ọsọ site na ọkụ ọkụ na-agbanwe agbanwe.
•High nnyefe arụmọrụ na ala ofufe usoro ume ọnwụ.
•Mgbanwe njikọ maka moto aro na nnyefe aro, ọ dịghị mkpa erughị ala ma ọ bụ ịgbanwe belt, ala mmezi ọrụ iyuzucha ofufe.
•Nwere ike igboju ọnọdụ ikuku dị iche iche.
•Iburu ụlọ mee echichi ebe okpomọkụ na vibration sensọ, nwere ike iwunye mfe nke ofufe na-agba ọsọ nlekota oru ngwaọrụ.
•Họrọ ike ịzọpụta moto nke ndị na-emepụta ụgbọ ala China (ma ọ bụ ndị ahịa chọrọ), àgwà a pụrụ ịdabere na ya, obere ume ike.
•Nhazi nhazi dika ihe ndi oru choro choro.
•N'ịnabata elu mma carbon ígwè n'ichepụta, ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara na ndị ọzọ metal ihe dị ka ndị ahịa 'chọrọ.
•Dị iche iche nhọrọ mmiri maka nhọrọ gị.
Highlọ Ọrụ Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Eme Ihe
Highlọ ọrụ mmegharị ọkụ dị elu dị mkpa nke ahọpụtara nhọrọ nnweta
Ọsọ r / min
Mkpokọta nrụgide Pa
Igba m3/ h
Na-asọba m3 / h
Nke gara aga: Igwe ikuku na-ekpo ọkụ
Osote: Cyclone Powder Coljá mkpoko
Okwu Mmalite Gịnị bụ Portable Mobile Belt Conveyor eji? Portable Mobile echebe ebu nwere ike ọtụtụ-eji chemical ụlọ ọrụ, unyi, m, eletriki ngalaba, ọkụ ụlọ ọrụ, ọka, njem ngalaba wdg O kwesịrị ekwesị maka erute dị iche iche ihe na granular ma ọ bụ ntụ ntụ. Nnukwu njupụta kwesịrị ịbụ 0,5 ~ 2.5t / m3. Ọ ...